FIGHTING GAME ကစားရင် သိထားသင့်သောအချက်များ Part (1) – Gaming Noodle
FIGHTING GAME ကစားရင် သိထားသင့်သောအချက်များ (1)
Fighting Game တစ်​ခုကို စ​ဆော့လို့ ​တွေ့တဲ့ခလုတ်​​တွေ​လျှောက်​နှိပ်​​နေရင်​ အချိန်​အတိုင်းအတာတစ်​ခုမှာ ဘာတွေဖြစ်​လာနိုင်​လဲ ဆိုတာကို အရင်​ဆောင်းပါးမှာ​ပြောထားပြီးသား ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီတစ်ခါ​တော့ Street Fighter, Tekken, Marvel vs Capcom, Mortal Kombat, Blazblue အစရှိသ​ရွေ့ ပြိုင်​ပွဲဝင်​ fighting game ​တွေ​ ဆော့မယ်ဆိုရင်​သိထားသင့်​တဲ့အချက်​များ ပထမပိုင်းကို အကျယ်​ဖွင့်​ရှင်းပြ​ပေးပါ့မယ်​။
ပထမဆုံးသိထားရမှာက Naruto Ultimate Ninja Storm, Jump Force တို့လိုဂိမ်းမျိုးကို Arena Fighter လို့ သက်​သက်​​ခေါ်​ကြောင်းပါ။ ဒီ​ကောင်​​တွေက fan ​တွေအကြိုက်​လုပ်​ထားတဲ့ ဂိမ်းမျိုးဘက်​ပို​ရောက်​ပြီး Fighting Game လို့ခေါ်မရပါဘူး။ Balance ဆိုတာလဲမရှိဘဲ တစ်​ခါထွက်​ပြီး dlc ကလွဲလို့​ နောက်​ support ထပ်​မလာတော့တဲ့ ဂိမ်းမျိုး​တွေမို့ ဒီ article နဲ့အကျုံးမဝင်​ပါဘူး။
အရင်​​ပြောခဲ့သလိုပါပဲ fighting game တစ်​ခုရဲ့ discord နဲ့ community တစ်​ခုကို join ပြီဆိုရင်​ဒီအခေါ်အဝေါ်တွေမသိဘဲ ဝင်​စကား​ပြောလို့မရသလောက်ပါပဲ။ ဘာ​တွေ​ပြော​နေမှန်းမသိဘဲနဲ့ ယောင်​​တောင်​​တောင်​ဖြစ်​​နေပါလိမ့်​မယ်​။
စစချင်း ပထမပိုင်းအတွက် ကိုယ်​ကိုင်​မယ့်​ character အတွက်​ အမျိုးအစားအ​ခေါ်အ​ဝေါ်​တွေရှင်းပြ​ပေးပါ့မယ်​။ ကိုယ်ကစားမယ့် character နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့် ရန်သူု character ဟာ ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ ဘာအကွက်တွေပါလဲ၊ ဘယ်လိုလာရင်ဘာပြန်လုပ်ရမယ် ဆိုတာသိထားဖို့ Fighting Game Player တစ်ယောက်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
Zangief (Street Fighter V)
အနီးစပ်​ဆုံးဥပမာ​ပြောပါဆို Street Fighter ထဲက Zangief ပါ။ သူ့မှာ အ​ဝေးပစ်​တစ်​ခုမှ မပါပါဘူး။ လက်သီးနဲ့ယှဉ်​ထိုး​၊ ခြေ​ထောက်​နဲ့ကန်​ရင်​လဲ​နှေး​တော့ ကိုယ်​အရင်​ခံရဖို့များပါတယ်​။ အဲဒါဆို သူတို့အတွက်​အားသာတာဘာလဲ? HP သို့မဟုတ်​ ​သွေးများပါတယ်​။ အ​ပေါ်က hp bar (သွေးတန်း) ဟာ တကယ်​​တော့ တစ်​​ကောင်​နဲ့တစ်ကောင်​ တူတယ်​ထင်​ရ​ပေမယ့်​ မတူပါဘူး။ နံပါတ်​ကိုယ်​စီရှိပါတယ်​။ အဲအတွက်​​တော့ grappler ​တွေရဲ့​သွေးက အများဆုံးပါ။ ​နောက်​တစ်​ခုက ကိုင်​​ပေါက်​တဲ့အခါထိတဲ့ damage။ Grappler ​တွေဆီက ကိုင်​​ပေါက်​တာခံရပြီဆို အနည်းဆုံး hp 35% ​လောက်​ ချက်​ချင်းကွိသွားနိုင်​ပါတယ်​။ ​သွေးတစ်​ဝက်​​အောက်​ဆို အခန့်​မသင့်​ရင်​​ တန်း​တောင်​​သေသွားနိုင်​ပါတယ်​။ ကိုင်​​ပေါက်​တာနဲ့ ယှဉ်​ထိုးတာမှာ ထိုးတာကမြန်​ပါတယ်​။ စုံထိမယ်​ဆိုထိုးတာပဲ ထိပါတယ်​။ ဟာ အဲဒါဆို grappler ​တွေက​စောက်​​ပေါကြီး​ပေါ့? မဟုတ်​ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အရမ်းများတဲ့ hp ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်​လို့ရပါတယ်​။ ​ဆော့​နေတာဟာ fighting game ပါ။ တစ်​ဖက်​လူ​မှောက်​သွားရင်​နိုင်​ပါပြီ။ အဲ​တော့ ဟိုဘက်​​သွေး ၅၀​လျော့ဖို့ ကိုယ့်​ဘက်​က ၃၀​လောက်​​ပေးထိရင်​လဲ ထိရတာပါပဲ။
ငါချည့်ပဲခံနေရတယ်ကွာ ဆိုတဲ့လူမျိုး Grappler ဆော့လို့မဖြစ်ပါဘူး။ Grappler ​တွေက အ​ဝေးပစ်​ character ​တွေနဲ့ knockback ​နောက်​ပြန်​တွန်းတဲ့အကွက်​​တွေနဲ့​တွေ့ရင်​ ဒုက္ခ​ရောက်​ပါတယ်​။ ​Grappler ​တွေရဲ့ အဓိကသိုင်းကွက်​က ကာနိုင်​ဖို့ပါ။ ရန်​သူတစ်​ခုခုချပြီး​ နောက်​တစ်​ကွက်​သုံးဖို့ကြာ​နေတုန်းမှာ ​ပြေးပြီးဖြစ်​ဖြစ်​ ခုန်​ပြီးဖြစ်​ဖြစ်​​ ပြေးကပ်​ပါ။ Controller ကြီးရိုက်​ခွဲတယ်​ဆိုတဲ့ တရားခံထဲမှာ Grappler ​တွေထိပ်​ဆုံးကပါပါတယ်​။ ကိုယ်​ကတစ်​မုန်းချထားပြီး သူကမ​သေ၊ အဲမှာအနားကပ်​ပြီး ​လေးချက်​​လောက်​​ကိုင်​​ပေါက်​လိုက်​ပြီး ကိုယ့်​လူ​ရှောသွားရင်​ salty မဖြစ်​ပဲ​နေမလားစဉ်းစားသာကြည့်​ပါ :3 ​သေချာတာက​တော့ grappler ​တွေက beginner friendly မဖြစ်​ပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ စိတ်ရှည်​သည်းခံ သူများကိုစိတ်​ဒုက္ခ​ပေးချင်​တယ်​ဆိုရင်​​တော့ ဒီ​ကောင်​​တွေ pick ပြီးသာ train လိုက်​ပါခင်​ဗျာ။
ဒုတိယ စိတ်​ဒုက္ခအ​ပေးနိုင်​ဆုံး character အမျိုးအစားဖြစ်​ပါတယ်​။ လူ​ပေါ်မူတည်​ပြီး ပထမ​နေရာလဲ ရနိုင်​ပါတယ်​။ Grappler ရဲ့လုံးဝ​ပြောင်းပြန်​ အ​ဝေးပစ်​ character ပါ။ အနီးစပ်​ဆုံးဆို Blazblue ထဲက Nu-13 ဆိုတဲ့ character ကို​လေ့လာနိုင်​ပါတယ်​။ ခုမှစ​ဆော့တဲ့ Newbie နဲ့ Noob ​တွေဆက်​မ​ဆော့ချင်​​အောင်​ သမနိုင်​တဲ့ character အမျိုးအစားပါ။ အ​ဝေးက​နေပဲ projectile ​တွေထိုင်​လွှတ်​​နေပြီး ဘာမှမလုပ်​လိုက်​ရပဲ​​သေသွားတယ်​ဆိုတာ​ တော်​​တော်​စိတ်​ညစ်​ဖို့​ကောင်းပါတယ်​။
Zoner ​တွေရဲ့အားသာချက်​ကအ​ထွေအထူးမလိုတဲ့အတွက်​ ဒီပြဿနာက သူတို့အားနည်းချက်​ကိုသိဖို့ ပိုအ​ရေးကြီးပါတယ်​။ Character အမျိုးအစား​တွေထဲမှာ hp အနည်းဆုံးဖြစ်​ပါတယ်​။ Grappler ဖမ်းတာ ၂ချက်​​လောက်​မိပြီး သုံးချက်​​လောက်​ထိုးခံရရင်​ တန်း​သေပါတယ်​။ damage ကများနိုင်​သလို နည်းပြီးအချက်​​ရေ များတာလဲ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ damage များတဲ့ zoner ​တွေက တစ်​ချက်​နဲ့တစ်​ချက်​ကြားမှာ ဟတဲ့အချိန်​များပါတယ်​။ ကာတာမှားပြီး ထိသွားရင်​​တော့ အနစ်​ကြီး​တွေပါ။ အချက်​​ရေများတဲ့ zoner ​တွေက​တော့ သူတို့လွတ်​တဲ့အချိန်​ကို ကိုယ်​မခန့်​မှန်းတတ်​ရင်​ ဒုက္ခ​ရောက်​နိုင်​ပါတယ်​။ တစ်​ချက်​​လောက်​ထိလဲ သိပ်​ပြသနာမရှိတာမို့ နည်းနည်း အာရုံစိုက်​လိုက်​ရင်​ လွတ်​ပါတယ်​။ ဆက်​တိုက်​ထိရင်​​တော့ gg ​ပေါ့ဗျာ xD
အကွက်​တစ်​ကွက်​နဲ့ တစ်​ကွက်​ကြား ကြာချိန်​များပါတယ်​။ အဲဒါမများရင်​ ​နောက်​တစ်​ကွက်​စဖို့အချိန်​ကြာပါတယ်​။ ယှဉ်​ချရင် ​ဘယ်​သူ့ကိုမှ မနိုင်​ပါဘူး။ ပြီးရင်​​လေ​ပေါ်ကလာတာကို ပြန်​ချနိုင်​တဲ့အကွက်​ နည်းပါတယ်​၊ မပါရင်​လဲ မပါပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ အ​ဝေးပြန်​တွန်းတဲ့ knockback ​တွေ​တော့ပါပါတယ်​။ Beginner friendly ဖြစ်​လားဆို ဖြစ်​ပါတယ်​။ ကိုယ်​ကြွယ်​ရင်​ကြွယ်​သ​လောက်​ တစ်​ဖက်​လူစိတ်​ဆင်းရဲ​အောင်​ လုပ်​ပြလို့ရပါတယ်​။ skill အလယ်​အလတ်​​​အောက်​စွန်းနားထိ zoner ​တွေကို ပြန်​ချနိုင်​တဲ့လူ နည်းပါ​သေးတယ်​။ High lvl ကိစ္စက​တော့​ပြောစရာမလိုဘူးထင်​ပါတယ်​။ ကိုယ့် skill နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။
Dante Vs Deadpool (Marvel Vs Capcom 3)
Zoner လဲမဟုတ်​ Grappler လဲမဟုတ်​၊ Range အလယ်​အလတ်​ချတဲ့ character မျိုးပါ။ ပွဲစစချင်း ​​နေရာချ​ပေးတဲ့ neutral အ​ခြေအ​နေမှာ အကြမ်းဆုံးလို့​ပြောလို့ရပါတယ်​။ အရမ်းနီးစရာလဲမလိုသလို အရမ်းလဲမ​ဝေးပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်​ ဓားနဲ့ခုတ်​တဲ့ Character ​တွေပါ။ ဒီ​ကောင်​​တွေက​တော့ စိတ်​ဒုက္ခ​ပေးတာ အလယ်​အလတ်​ပါ။ Zoner ကိုင်​ထားရင်​ပြဿနာမရှိ​ပေမယ့်​ လက်​သီးသမား​တွေဆို အာရုံ​နောက်​ပါတယ်​။ အရမ်းမမြန်​​ပေမယ့်​​ နှေးလဲမ​နှေးပါဘူး။ အ​ဝေးပစ်​​တွေလဲ တစ်​ခုနှစ်​ခုပါတတ်​ပါတယ်​။ ​လေ​ပေါ်က လာတာကိုလဲ ကာနိုင်​ပါတယ်​။ ကိုယ်​ထိုးတာမထိဘူး၊ သူချ​တော့ထိတယ်​ ဆိုတာဒီ character ​တွေပါ။
damage အားဖြင့်​ အလယ်​အလတ်​က​နေ များနိုင်​ပါတယ်​။ များတဲ့​ကောင်​ဆို​ Attack Speed နှေးပါတယ်​။ Combo count က​တော့ Grappler နဲ့ Zoner ပြီးရင်​အနည်းဆုံးပါ။ ဆက်​တိုက်​ချနိုင်​တဲ့ အကွက်​​တွေရှိပေမယ့် နည်းပါတယ်​။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လေပေါ်က လာတာကိုကာဖို့ ထည့်ပေးထားတဲ့ Anti-Air အကွက်တွေကတော့ အင်မတန်ကိုမြန်ပြီး အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရန်သူက midrange မှန်းသိရင် ဖြစ်နိုင်ရင် ခုန်ပြီး မဝင်တာ ပိုလုံခြုံပါတယ်။ Hp က အလယ်​အလတ်​က​နေ အဲထက်နည်းနည်း ပိုနည်းနိုင်​ပါတယ်​။ Skill lvl က​တော့ mid-high ပါ။
Ryu & Ken (Street Fighters)
ရှင်းရှင်း​ပြောရင်​ Street Fighter ထဲက Ryu နဲ့ Ken ကို​ပြောတာပါ။ သူတို့လုပ်​မရတာ မရှိပါဘူး။ အ​ဝေးပစ်​ Hadouken လဲပါပါတယ်​၊ ​လေ​ပေါ်က လာတာကိုကာမယ့်​ ပင့်​ထိုးတဲ့ Shoryuken လဲပါပါတယ်​။ ကြွယ်​ရင်​ကြွယ်​သ​လောက်​ ဆက်​တိုက်​တီးလို့ရပါတယ်​။ လှုပ်​ရှားတာ​နှေးပါတယ်​။ အလယ်​အလတ်​ range ကိုဓားနဲ့ခုတ်​သလို လှမ်းကန်​တာလဲပါပါတယ်​၊ ဒါ​ပေမယ့်​​နှေးပါတယ်​။ အကုန်​လုပ်​လို့ရသလို အကုန်​လုံးလဲမကြမ်းတဲ့ character ​တွေကို Shoto လို့​ခေါ်ပါတယ်​။ အကုန်​လုပ်​လို့ရလို့ ထွက်​ချင်​ရာထွက်​​လျှောက်​နှိပ်​လို့ရတာ ဒီ shoto ​တွေပါ။
သူတို့ကို Clone ထားတဲ့ပုံစံတူ character ​တွေ fighting game တိုင်းလိုလိုပါတယ်​။ အဲဒါကို Shoto လို့​ခေါ်ပါတယ်​။ Skill lvl က​တော့ ​ကောင်း​ကောင်းကစားနိုင်​ဖို့ဆို mid-high ​လောက်​ရှိပါတယ်​။ Hp လဲ အလယ်​အလတ်​နဲ့ များတဲ့အထဲပါပါတယ်​။ ကြမ်းတဲ့​ကောင်​ဆို တစ်​ဖက်​လူကို စိတ်​ဒုက္ခ​ပေးနိုင်​ပြီး ပုံမှန်​ဆိုသာမန်​ပါပဲ lol
Ling Xiaoyu (Tekken 7)
ကောင်း​ကောင်းကိုင်​တတ်​ရင်​ သူများ​တွေကို စိတ်​ဒုက္ခအ​ပေးနိုင်​ဆုံး Grappler ​တွေပြီးရင်​ rushdown ပါပဲ။ အ​ဝေးပစ်​ပါနိုင်​​ပေမယ့်​ နည်းပါတယ်​။ Hp ကနည်းတာနဲ့ အလယ်​အလတ်​ကြားမှာရှိပါတယ်​။ ​Anti-air ပါနိုင်​ရင်​ နည်းပြီး မပါတာလဲဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ Range ကလဲ လက်​သီးနဲ့ထိုးတဲ့​ကောင်​များတာမို့ တိုပါတယ်​။ ဘယ်​ဟာမှာ ကြမ်းတာလဲ? Combo Wombo ဆက်​တိုက်​ချတာ​တွေပါ။ Rushdown ​တွေဟာလဲ Grappler ​တွေလို အနီးကပ်​ဖို့လိုပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဖမ်းမယ့်​အစား ကိုယ်​ထိုးတာထိဖို့ အ​ရေးအကြီးဆုံးပါ။ ထိပြီဆိုတာနဲ့​ နောက်​တစ်​နာရီ​လောက်​ ရုပ်​ရှင်​ကြည့်​သလို ဆက်​တိုက်​ချခံရ၊ character ​ပေါ်မူတည်​ပြီး hp တစ်​ဝက်​​လောက်​ကုန်​သွားနိုင်​တာ Rushdown ​တွေပါ။ ဥပမာဆိုရင် Tekken ထဲက Xiaoyu ပါ။ အဓိက strategy က​တော့ရှင်းပါတယ်​။ ရတဲ့နည်းနဲ့ အနားကပ်​ပါ။ ဒါ​ပေမယ့်​ Grappler ​တွေလိုအရမ်း​တောင့်​ခံလို့မရပါဘူး။ ​နှေး​တဲ့​ကောင်​​တွေကို သမနိုင်​​ပေမယ့်​ shoto နဲ့ midrange ​တွေလို သူမသာကိုယ်​မသာဆို ဒုက္ခ​ရောက်​ပါတယ်​။ Hp ကနည်းတဲ့ထဲပါ​တော့ ကိုယ်​ချခံရင်လဲ နုပ်​ပါတယ်​။ ပြီး​တော့ rushdown သမားက ကစားတဲ့လူနဲ့ဆိုင်​ပါတယ်​။ ကိုယ့်​ combo timing ချိန်​တာလွဲတာတို့ မှားနှိပ်​မိတာမျိုးဆို ရန်​သူသာ ငဝိမဟုတ်​ရင်​ ပြန်​လွတ်​ထွက်​နိုင်​ပါတယ်​။ အရမ်း​တော့စိတ်​မပူပါနဲ့ Rushdown ​တွေမှာ ရန်​သူအနားကပ်​ဖို့​ ပြေးထိုးတာ​တွေ ချက်​ချင်း blink ​ပြေးကပ်​တာ​တွေ အစုံပါပါတယ်​။ သူ့တာဝန်​က ရန်​သူကို ဖိအား​ပေးနိုင်​သ​လောက်​​ပေးဖို့ပါ။ Skill tier က​တော့ rushdown character စစ်​စစ်​ဆို High ထဲပါပါတယ်​။
Weiss Vs Yukiko (Blazblue Cross Tag Battle)
ခပ်​​ကြောင်​​ကြောင်​ character ​တွေပါ။ အကုန်​မပါ​ပေမယ့်​ မထင်​ထားတာ​တွေ​ရောထားတာမျိုးမို့ Shoto လဲမဟုတ်​ပါဘူး။ ဥပမာ Grappler ကို Zoning ​ပေးထားတဲ့ character မျိုး၊ ​လေထဲကသီးသန့်​ချမှကြမ်းတတ်တဲ့ Flying type character မျိုး​တွေပါ (​​မြေ​ပေါ်မှာဆိုအကွက်​နည်းတာမို့ တမုန်းခုန်​​နေရတာမျိုး) သူတို့လဲ သူ့ဟာနဲ့သူ အားနည်းချက်​​တွေရှိပါတယ်​။ Fighting game တိုင်းလိုလိုမှာ တစ်​​ကောင်​နှစ်​​ကောင်​ အမြဲပါတတ်​ပါတယ်​။ တစ်​​ကောင်​နဲ့တစ်​​ကောင်​ မတူပါဘူး။ hp က​လဲမှန်းမရပါဘူး၊ များနိုင်​သလိုနည်းလဲနည်းနိုင်​ပါတယ်​။ ဥပမာ Street Fighter ထဲက ဆီသုတ်ချမှကြမ်းတဲ့ Hakan နဲ့ Blazblue Cross Tag Battle က Jumping pad (game ထဲမှာတော့ magic glyph တွေပေါ့ ရှင်းအောင်ပြောပြတာ xD) တွေ အရင်စီရတဲ့ Weiss လိုမျိုးပါ။ Skill lvl က​တော့များ​သောအားဖြင့်​ High ထဲပါပါတယ်​။
နောက်​ post တစ်​ခုကြရင်​ Fighting game mechanic ​တွေနဲ့ battle ချတဲ့ အ​ခေါ်အ​ဝေါ်​တွေကို သီးသန့်ထပ်​ရှင်းပြ​ပေးပါဦးမယ်​ခင်​ဗျာ။ Post အရမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့ အခုတော့ဒီလောက်ပါပဲ 😀
FIGHTING GAME ကစားရငျ သိထားသငျ့သောအခကျြမြား (1)
Fighting Game တဈခုကို စဆော့လို့ တှတေဲ့ခလုတျတှလြှေောကျနှိပျနရေငျ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုမှာ ဘာတှဖွေဈလာနိုငျလဲ ဆိုတာကို အရငျဆောငျးပါးမှာပွောထားပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါတော့ Street Fighter, Tekken, Marvel vs Capcom, Mortal Kombat, Blazblue အစရှိသရှေ့ ပွိုငျပှဲဝငျ fighting game တှေ ဆော့မယျဆိုရငျသိထားသငျ့တဲ့အခကျြမြား ပထမပိုငျးကို အကယျြဖှငျ့ရှငျးပွပေးပါ့မယျ။
ပထမဆုံးသိထားရမှာက Naruto Ultimate Ninja Storm, Jump Force တို့လိုဂိမျးမြိုးကို Arena Fighter လို့ သကျသကျချေါကွောငျးပါ။ ဒီကောငျတှကေ fan တှအေကွိုကျလုပျထားတဲ့ ဂိမျးမြိုးဘကျပိုရောကျပွီး Fighting Game လို့ချေါမရပါဘူး။ Balance ဆိုတာလဲမရှိဘဲ တဈခါထှကျပွီး dlc ကလှဲလို့ နောကျ support ထပျမလာတော့တဲ့ ဂိမျးမြိုးတှမေို့ ဒီ article နဲ့အကြုံးမဝငျပါဘူး။
အရငျပွောခဲ့သလိုပါပဲ fighting game တဈခုရဲ့ discord နဲ့ community တဈခုကို join ပွီဆိုရငျဒီအချေါအဝျေါတှမေသိဘဲ ဝငျစကားပွောလို့မရသလောကျပါပဲ။ ဘာတှပွေောနမှေနျးမသိဘဲနဲ့ ယောငျတောငျတောငျဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
စစခငျြး ပထမပိုငျးအတှကျ ကိုယျကိုငျမယျ့ character အတှကျ အမြိုးအစားအချေါအဝျေါတှရှေငျးပွပေးပါ့မယျ။ ကိုယျကစားမယျ့ character နဲ့ရငျဆိုငျရမယျ့ ရနျသူု character ဟာ ဘယျလိုမြိုးနဲ့ ဘာအကှကျတှပေါလဲ၊ ဘယျလိုလာရငျဘာပွနျလုပျရမယျ ဆိုတာသိထားဖို့ Fighting Game Player တဈယောကျအတှကျ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။
အနီးစပျဆုံးဥပမာပွောပါဆို Street Fighter ထဲက Zangief ပါ။ သူ့မှာ အဝေးပဈတဈခုမှ မပါပါဘူး။ လကျသီးနဲ့ယှဉျထိုး၊ ခွထေောကျနဲ့ကနျရငျလဲနှေးတော့ ကိုယျအရငျခံရဖို့မြားပါတယျ။ အဲဒါဆို သူတို့အတှကျအားသာတာဘာလဲ? HP သို့မဟုတျ သှေးမြားပါတယျ။ အပျေါက hp bar (သှေးတနျး) ဟာ တကယျတော့ တဈကောငျနဲ့တဈကောငျ တူတယျထငျရပမေယျ့ မတူပါဘူး။ နံပါတျကိုယျစီရှိပါတယျ။ အဲအတှကျတော့ grappler တှရေဲ့သှေးက အမြားဆုံးပါ။ နောကျတဈခုက ကိုငျပေါကျတဲ့အခါထိတဲ့ damage။ Grappler တှဆေီက ကိုငျပေါကျတာခံရပွီဆို အနညျးဆုံး hp 35% လောကျ ခကျြခငျြးကှိသှားနိုငျပါတယျ။ သှေးတဈဝကျအောကျဆို အခနျ့မသငျ့ရငျ တနျးတောငျသသှေားနိုငျပါတယျ။ ကိုငျပေါကျတာနဲ့ ယှဉျထိုးတာမှာ ထိုးတာကမွနျပါတယျ။ စုံထိမယျဆိုထိုးတာပဲ ထိပါတယျ။ ဟာ အဲဒါဆို grappler တှကေစောကျပေါကွီးပေါ့? မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အရမျးမြားတဲ့ hp ကိုအလှဲသုံးစားလုပျလို့ရပါတယျ။ ဆော့နတောဟာ fighting game ပါ။ တဈဖကျလူမှောကျသှားရငျနိုငျပါပွီ။ အဲတော့ ဟိုဘကျသှေး ၅၀လြော့ဖို့ ကိုယျ့ဘကျက ၃၀လောကျပေးထိရငျလဲ ထိရတာပါပဲ။
ငါခညျြ့ပဲခံနရေတယျကှာ ဆိုတဲ့လူမြိုး Grappler ဆော့လို့မဖွဈပါဘူး။ Grappler တှကေ အဝေးပဈ character တှနေဲ့ knockback နောကျပွနျတှနျးတဲ့အကှကျတှနေဲ့တှရေ့ငျ ဒုက်ခရောကျပါတယျ။ Grappler တှရေဲ့ အဓိကသိုငျးကှကျက ကာနိုငျဖို့ပါ။ ရနျသူတဈခုခုခပြွီး နောကျတဈကှကျသုံးဖို့ကွာနတေုနျးမှာ ပွေးပွီးဖွဈဖွဈ ခုနျပွီးဖွဈဖွဈ ပွေးကပျပါ။ Controller ကွီးရိုကျခှဲတယျဆိုတဲ့ တရားခံထဲမှာ Grappler တှထေိပျဆုံးကပါပါတယျ။ ကိုယျကတဈမုနျးခထြားပွီး သူကမသေ၊ အဲမှာအနားကပျပွီး လေးခကျြလောကျကိုငျပေါကျလိုကျပွီး ကိုယျ့လူရှောသှားရငျ salty မဖွဈပဲနမေလားစဉျးစားသာကွညျ့ပါ :3 သခြောတာကတော့ grappler တှကေ beginner friendly မဖွဈပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ စိတျရှညျသညျးခံ သူမြားကိုစိတျဒုက်ခပေးခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီကောငျတှေ pick ပွီးသာ train လိုကျပါခငျဗြာ။
ဒုတိယ စိတျဒုက်ခအပေးနိုငျဆုံး character အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။ လူပျေါမူတညျပွီး ပထမနရောလဲ ရနိုငျပါတယျ။ Grappler ရဲ့လုံးဝပွောငျးပွနျ အဝေးပဈ character ပါ။ အနီးစပျဆုံးဆို Blazblue ထဲက Nu-13 ဆိုတဲ့ character ကိုလလေ့ာနိုငျပါတယျ။ ခုမှစဆော့တဲ့ Newbie နဲ့ Noob တှဆေကျမဆော့ခငျြအောငျ သမနိုငျတဲ့ character အမြိုးအစားပါ။ အဝေးကနပေဲ projectile တှထေိုငျလှတျနပွေီး ဘာမှမလုပျလိုကျရပဲသသှေားတယျဆိုတာ တျောတျောစိတျညဈဖို့ကောငျးပါတယျ။
Zoner တှရေဲ့အားသာခကျြကအထှအေထူးမလိုတဲ့အတှကျ ဒီပွဿနာက သူတို့အားနညျးခကျြကိုသိဖို့ ပိုအရေးကွီးပါတယျ။ Character အမြိုးအစားတှထေဲမှာ hp အနညျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ Grappler ဖမျးတာ ၂ခကျြလောကျမိပွီး သုံးခကျြလောကျထိုးခံရရငျ တနျးသပေါတယျ။ damage ကမြားနိုငျသလို နညျးပွီးအခကျြရေ မြားတာလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ damage မြားတဲ့ zoner တှကေ တဈခကျြနဲ့တဈခကျြကွားမှာ ဟတဲ့အခြိနျမြားပါတယျ။ ကာတာမှားပွီး ထိသှားရငျတော့ အနဈကွီးတှပေါ။ အခကျြရမြေားတဲ့ zoner တှကေတော့ သူတို့လှတျတဲ့အခြိနျကို ကိုယျမခနျ့မှနျးတတျရငျ ဒုက်ခရောကျနိုငျပါတယျ။ တဈခကျြလောကျထိလဲ သိပျပွသနာမရှိတာမို့ နညျးနညျး အာရုံစိုကျလိုကျရငျ လှတျပါတယျ။ ဆကျတိုကျထိရငျတော့ gg ပေါ့ဗြာ xD
အကှကျတဈကှကျနဲ့ တဈကှကျကွား ကွာခြိနျမြားပါတယျ။ အဲဒါမမြားရငျ နောကျတဈကှကျစဖို့အခြိနျကွာပါတယျ။ ယှဉျခရြငျ ဘယျသူ့ကိုမှ မနိုငျပါဘူး။ ပွီးရငျလပေျေါကလာတာကို ပွနျခနြိုငျတဲ့အကှကျ နညျးပါတယျ၊ မပါရငျလဲ မပါပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဝေးပွနျတှနျးတဲ့ knockback တှတေော့ပါပါတယျ။ Beginner friendly ဖွဈလားဆို ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျကွှယျရငျကွှယျသလောကျ တဈဖကျလူစိတျဆငျးရဲအောငျ လုပျပွလို့ရပါတယျ။ skill အလယျအလတျအောကျစှနျးနားထိ zoner တှကေို ပွနျခနြိုငျတဲ့လူ နညျးပါသေးတယျ။ High lvl ကိစ်စကတော့ပွောစရာမလိုဘူးထငျပါတယျ။ ကိုယျ့ skill နဲ့ပဲဆိုငျပါတယျ။
Zoner လဲမဟုတျ Grappler လဲမဟုတျ၊ Range အလယျအလတျခတြဲ့ character မြိုးပါ။ ပှဲစစခငျြး နရောခပြေးတဲ့ neutral အခွအေနမှော အကွမျးဆုံးလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ အရမျးနီးစရာလဲမလိုသလို အရမျးလဲမဝေးပါဘူး။ ဥပမာအားဖွငျ့ ဓားနဲ့ခုတျတဲ့ Character တှပေါ။ ဒီကောငျတှကေတော့ စိတျဒုက်ခပေးတာ အလယျအလတျပါ။ Zoner ကိုငျထားရငျပွဿနာမရှိပမေယျ့ လကျသီးသမားတှဆေို အာရုံနောကျပါတယျ။ အရမျးမမွနျပမေယျ့ နှေးလဲမနှေးပါဘူး။ အဝေးပဈတှလေဲ တဈခုနှဈခုပါတတျပါတယျ။ လပေျေါက လာတာကိုလဲ ကာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျထိုးတာမထိဘူး၊ သူခတြော့ထိတယျ ဆိုတာဒီ character တှပေါ။
damage အားဖွငျ့ အလယျအလတျကနေ မြားနိုငျပါတယျ။ မြားတဲ့ကောငျဆို Attack Speed နှေးပါတယျ။ Combo count ကတော့ Grappler နဲ့ Zoner ပွီးရငျအနညျးဆုံးပါ။ ဆကျတိုကျခနြိုငျတဲ့ အကှကျတှရှေိပမေယျ့ နညျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ လပေျေါက လာတာကိုကာဖို့ ထညျ့ပေးထားတဲ့ Anti-Air အကှကျတှကေတော့ အငျမတနျကိုမွနျပွီး အရမျးကောငျးပါတယျ။ ကိုယျ့ရနျသူက midrange မှနျးသိရငျ ဖွဈနိုငျရငျ ခုနျပွီး မဝငျတာ ပိုလုံခွုံပါတယျ။ Hp က အလယျအလတျကနေ အဲထကျနညျးနညျး ပိုနညျးနိုငျပါတယျ။ Skill lvl ကတော့ mid-high ပါ။
ရှငျးရှငျးပွောရငျ Street Fighter ထဲက Ryu နဲ့ Ken ကိုပွောတာပါ။ သူတို့လုပျမရတာ မရှိပါဘူး။ အဝေးပဈ Hadouken လဲပါပါတယျ၊ လပေျေါက လာတာကိုကာမယျ့ ပငျ့ထိုးတဲ့ Shoryuken လဲပါပါတယျ။ ကွှယျရငျကွှယျသလောကျ ဆကျတိုကျတီးလို့ရပါတယျ။ လှုပျရှားတာနှေးပါတယျ။ အလယျအလတျ range ကိုဓားနဲ့ခုတျသလို လှမျးကနျတာလဲပါပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့နှေးပါတယျ။ အကုနျလုပျလို့ရသလို အကုနျလုံးလဲမကွမျးတဲ့ character တှကေို Shoto လို့ချေါပါတယျ။ အကုနျလုပျလို့ရလို့ ထှကျခငျြရာထှကျလြှောကျနှိပျလို့ရတာ ဒီ shoto တှပေါ။
သူတို့ကို Clone ထားတဲ့ပုံစံတူ character တှေ fighting game တိုငျးလိုလိုပါတယျ။ အဲဒါကို Shoto လို့ချေါပါတယျ။ Skill lvl ကတော့ ကောငျးကောငျးကစားနိုငျဖို့ဆို mid-high လောကျရှိပါတယျ။ Hp လဲ အလယျအလတျနဲ့ မြားတဲ့အထဲပါပါတယျ။ ကွမျးတဲ့ကောငျဆို တဈဖကျလူကို စိတျဒုက်ခပေးနိုငျပွီး ပုံမှနျဆိုသာမနျပါပဲ lol
ကောငျးကောငျးကိုငျတတျရငျ သူမြားတှကေို စိတျဒုက်ခအပေးနိုငျဆုံး Grappler တှပွေီးရငျ rushdown ပါပဲ။ အဝေးပဈပါနိုငျပမေယျ့ နညျးပါတယျ။ Hp ကနညျးတာနဲ့ အလယျအလတျကွားမှာရှိပါတယျ။ Anti-air ပါနိုငျရငျ နညျးပွီး မပါတာလဲဖွဈနိုငျပါတယျ။ Range ကလဲ လကျသီးနဲ့ထိုးတဲ့ကောငျမြားတာမို့ တိုပါတယျ။ ဘယျဟာမှာ ကွမျးတာလဲ? Combo Wombo ဆကျတိုကျခတြာတှပေါ။ Rushdown တှဟောလဲ Grappler တှလေို အနီးကပျဖို့လိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖမျးမယျ့အစား ကိုယျထိုးတာထိဖို့ အရေးအကွီးဆုံးပါ။ ထိပွီဆိုတာနဲ့ နောကျတဈနာရီလောကျ ရုပျရှငျကွညျ့သလို ဆကျတိုကျခခြံရ၊ character ပျေါမူတညျပွီး hp တဈဝကျလောကျကုနျသှားနိုငျတာ Rushdown တှပေါ။ ဥပမာဆိုရငျ Tekken ထဲက Xiaoyu ပါ။ အဓိက strategy ကတော့ရှငျးပါတယျ။ ရတဲ့နညျးနဲ့ အနားကပျပါ။ ဒါပမေယျ့ Grappler တှလေိုအရမျးတောငျ့ခံလို့မရပါဘူး။ နှေးတဲ့ကောငျတှကေို သမနိုငျပမေယျ့ shoto နဲ့ midrange တှလေို သူမသာကိုယျမသာဆို ဒုက်ခရောကျပါတယျ။ Hp ကနညျးတဲ့ထဲပါတော့ ကိုယျခခြံရငျလဲ နုပျပါတယျ။ ပွီးတော့ rushdown သမားက ကစားတဲ့လူနဲ့ဆိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ combo timing ခြိနျတာလှဲတာတို့ မှားနှိပျမိတာမြိုးဆို ရနျသူသာ ငဝိမဟုတျရငျ ပွနျလှတျထှကျနိုငျပါတယျ။ အရမျးတော့စိတျမပူပါနဲ့ Rushdown တှမှော ရနျသူအနားကပျဖို့ ပွေးထိုးတာတှေ ခကျြခငျြး blink ပွေးကပျတာတှေ အစုံပါပါတယျ။ သူ့တာဝနျက ရနျသူကို ဖိအားပေးနိုငျသလောကျပေးဖို့ပါ။ Skill tier ကတော့ rushdown character စဈစဈဆို High ထဲပါပါတယျ။
ခပျကွောငျကွောငျ character တှပေါ။ အကုနျမပါပမေယျ့ မထငျထားတာတှရေောထားတာမြိုးမို့ Shoto လဲမဟုတျပါဘူး။ ဥပမာ Grappler ကို Zoning ပေးထားတဲ့ character မြိုး၊ လထေဲကသီးသနျ့ခမြှကွမျးတတျတဲ့ Flying type character မြိုးတှပေါ (မွပေျေါမှာဆိုအကှကျနညျးတာမို့ တမုနျးခုနျနရေတာမြိုး) သူတို့လဲ သူ့ဟာနဲ့သူ အားနညျးခကျြတှရှေိပါတယျ။ Fighting game တိုငျးလိုလိုမှာ တဈကောငျနှဈကောငျ အမွဲပါတတျပါတယျ။ တဈကောငျနဲ့တဈကောငျ မတူပါဘူး။ hp ကလဲမှနျးမရပါဘူး၊ မြားနိုငျသလိုနညျးလဲနညျးနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ Street Fighter ထဲက ဆီသုတျခမြှကွမျးတဲ့ Hakan နဲ့ Blazblue Cross Tag Battle က Jumping pad (game ထဲမှာတော့ magic glyph တှပေေါ့ ရှငျးအောငျပွောပွတာ xD) တှေ အရငျစီရတဲ့ Weiss လိုမြိုးပါ။ Skill lvl ကတော့မြားသောအားဖွငျ့ High ထဲပါပါတယျ။
နောကျ post တဈခုကွရငျ Fighting game mechanic တှနေဲ့ battle ခတြဲ့ အချေါအဝျေါတှကေို သီးသနျ့ထပျရှငျးပွပေးပါဦးမယျခငျဗြာ။ Post အရမျးရှညျသှားမှာစိုးလို့ အခုတော့ဒီလောကျပါပဲ 😀
#Lan #FightingGames #Types